Madaxwaynaha Puntland oo la kulmay bulshada gobolka Bari – Radio Daljir
Madaxwaynaha Puntland oo la kulmay bulshada gobolka Bari
Diseembar 3, 2012 6:52 b 0
Bosaso, Dec 03 – Madaxwaynaha dowladda Puntland Dr Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed faroolle ayaa xalay la kulmay qaybaha kale duwan ee bulshada gobolka Bari.
Kulanka oo kadhacay madaxtooyada Bosaso ayaa waxaa kasoo qaybgalay inbadan oo ka mid ah ganacsatada, duubabka dhaqanka iyo golaha xukuumadda Puntland, waxaa intii kulanka uu socday laga hadlay arimo badan oo ay ka mid tahay geedi socodka dimuqaariyadda Puntland, amaanka iyo hormarka.
Madaxwaynaha dowladda Puntland ayaa kulanka kasoo jeediyay khudbad dheer oo qaadaty muddo 51-daqiiqadood oo uu kaga hadlay waxyaabaha u qabsoomay xukuumadiisa iyo qorshayaalka xiligaan horyaala.
Waxaa uu sheegay xukuumadiisa inay ku guulaystay meel marka dastuurka Puntland, Puntland ay u gudubtay nidaamka ku dhisan xisbiyada siyaasadeed oo uu sheegay hormar wayn inuu ku jiro.
Waxaa madaxwaynaha uu sidoo kale difaacay waqti kordhinta halka sano ee xukuumadda oo uu ku tilmaamay arin dastuuri ah, xilli siyaasiyiin badan ay kasoo horjeesteen go’aankaasi mudada sanadka xukuumadda ay ugu darsanayso.
Dr Faroolle ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday mashaariicda dalka lagu horumarinayo, waxaa uu sheegay garoonka diyaaradaha Bosaso oo ah garoonka ugu wayn ee Puntland dowladiisu xiligaan inay u haysyo 5-milyan oo doolar, oo ay ku dhisayso qaybta diyaaradaha ay ku ordaan ee Run-wayga.
Baarlamaanka Soomaaaliya oo ansixiyey xeer hoosaadkoodda.
Kulan nabadeed iyo arimo kale khuseeya oo ka dhacay xarunta Wasaaradda Haweenka PL xarunteeda Mudug (Sawir)